उद्योग समाचार - Page 1
मास्कको प्रयोगको बारेमा तपाईलाई के थाहा हुनुपर्दछ
भीडमा लागू हुँदैन सबैलाई मास्क लगाउनको लागि उपयुक्त छ। केहि समूहहरूको लागि, मास्क लगाउनुले अवस्थित अवस्था बढ्न सक्छ र जीवनलाई जोखिममा पार्ने पनि हुन सक्छ। त्यसकारण, हामी स्पष्ट हुनुपर्दछ कि त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि उत्तम तरिका सकेसम्म थोरै बाहिर जानु हो।
तातो पग्लियो ग्लू मेसिन खाद्य प्याकेजि industry उद्योगमा प्रयोग हुन्छ
तातो पग्लन ग्लू मेशीन खाना प्याकेजि forको लागि किन प्रयोग गर्न सकिन्छ? मुख्यतया किनभने तातो पग्लन चिपकने ठाउँ गैर विषैले र स्वादहीन छ, जसले खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्छ। तातो पग्लने चिपकने कोठाको तापमानमा ठोस हुन्छ, मात्र उच्च तापमानमा पग्लन्छ
मास्क कान लूपको वर्गीकरण
पर्किंग टेक्नोलोजीले ईयरलोप मास्कको वर्गीकरणको लागि निम्न बुँदाहरूको सारांश दिन्छ: १। इयरलूपको लोच छ कि छैन भन्ने अनुसार, यसलाई निम्नमा विभाजित गरिएको छ: इलास्टिक इयर लूपलाई लोचिक रस्सी, लोचिक डोरी २ पनि भनिन्छ। बिभिन्न सामग्रीका अनुसार यसलाई विभाजन गर्न सकिन्छ: स्पानडेक्स ईयरलूप, नायलॉन इयरलूप, पॉल......
तातो पग्लने चिपकने उत्पादनहरूको गुणस्तर कसरी सुधार गर्ने?
तातो पग्लने चिपकने फाराम स्थिर छैन, र केहि कच्चा माल तातो पग्लन चिपकने उत्पादनहरूको गुणस्तर सुधार गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। तातो पग्लने चिपचाइमा स्नेहकको उचित थपले ताप र मोल्डिंगको क्रममा प्लास्टिकको रिलीज प्रदर्शनमा सुधार गर्न र उत्पादको सतह समाप्त गर्न सक्दछ।
के तपाईंलाई मास्कको केहि साना विवरणहरू थाहा छ?
यद्यपि मेरो देशको घरेलु महामारी नियन्त्रणमा छ, धेरै कम्पनीहरूले अझै काम गर्न जाँदा कर्मचारीहरूलाई मास्क लगाउन कडाइका साथ आवश्यकता छ। हामी उनीहरूको दृष्टिकोणसँग सहमत छौं। के तपाईसँग यो अनुभव छ?
ग्लू मेसिन र तातो पग्लिएका ग्लु मेसिन बीचको भिन्नताको बारेमा कुरा गर्दै
प्याकेजिंग उद्योगको अतिरिक्त, निर्माण उद्योग, अटोमोबाइल उद्योग, आदि। तातो पग्लन ग्लू मेसिन प्रयोग गर्दछ, गोंद मेसिन पनि प्याकेजि production उत्पादनको लागि एक सहायक उपकरणको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, र यो ग्लू ग्लूइंग पग्लनको लागि एक प्रकारको मेकानिकल उपकरण पनि हो। उपकरण। यद्यपि तातो पग्लिएका ग्लू मेसिनहरू......